Ny fepetra manatrika ny mpianatra na ny mpianatra no raisina ho &quot;modely mpanatrika&quot;. Ny &quot;modely mpanatrika&quot; dia mpianatra iray izay manatrika eo amin&#39;ny 96% farafaharatsiny mandritra ny taom-pianarana (mpikarakara maharitra); na mpianatra izay nanatsara ny fanatrehany ny fahazoana isa telo farafaharatsiny farafahakeliny hatramin&#39;ny talohan&#39;ny taom-pianarana ankehitriny (manatsara ny mpanatrika). Ny fanatrehan&#39;ny mpianatra dia mihevitra ihany koa ny salanisan&#39;ireo mpianatra tsy tsy eo, na tsy mihoatra ny 10% amin&#39;ny andro voasoratra mandritra ny taom-pianarana. Ireo mpianatra izay mandany ny ankamaroan&#39;ny taom-pianarana miditra ao an-tsekoly ihany no tafiditra ao amin&#39;ny tatitra ny fahatongavan&#39;ireo mpianatra. (Loharanom-baovao: taom-pianarana 2018-2019)
Inona avy ireo lamina fanaon&#39;ny mpianatra amin&#39;ity orinasa ity?
Ny fepetra momba ny fanatrehan&#39;ny mpianatra na ny mpianatra dia raisina ho &quot;modely mpanatrika&quot; amin&#39;ny alàlan&#39;ny fanehoana ny fanatrehana maharitra na ny fahatongavan&#39;ny fanatrehana mandritra ny taom-pianarana. Ny tsy fahazoan-dàlana dia mampisondrotra ny tahan&#39;ny mpianatra izay tsy teo am-pianarana hihoatra ny 10 isan-jaton&#39;ny taom-pianarana, na inona na inona antony.
Ireo mpanatrika modely
Salanisan&#39;ny fanjakana 65.3%
Mpianatra manana fahasembanana
Salanisan&#39;ny fanjakana 61.9%
Salanisan&#39;ny fanjakana 18.3%
Salanisan&#39;ny fanjakana 13.7%
Ahoana no ataon&#39;ireo mpianatra amin&#39;ity orinasa ity raha oharina amin&#39;ny lasibatry ny fanjakana amin&#39;ny fanatrehana modely?
Ny kendrena interim dia manondro fivoarana andrasana ilaina hahatratrarana ny tanjona maharitra ho an&#39;ny fanjakana amin&#39;ny fanatrehana modely.